Maxuu Lafta-gareen kala hadlay Hay'adda FCA? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxuu Lafta-gareen kala hadlay Hay’adda FCA?
Ikali karvinen oo ah Wakiilka FCA ee Soomaaliya, ayaa Somaliland ku dhaleeceeyey tallaabadaasi, isagoo hoosta ka xariiqay in ay door muuqda ka qaadan doonaan xal u helida dhibaatada adag ee ay la tiicayaan dadkaasi.
BAYDHABO, Soomaaliya - Finn Church Aid (FCA) ayaa ka mid ah Ururada ugu waa weyn Finland ee kaalmada caalamiga ah, waana mid xubin ka ah shabakadda caalamiga ah ee ACT Alliance, wuxuuna ka shaqeeyaa taageerida dadka ugu nugul Adduunka, isagoo u ololeeya Dowlad wanaaga iyo cadaaladda.
Ururka ayaa Koonfur Galbeed ka caawiya Hormarinta Waxbarashada, Caafimaadka iyo daadejinta adeegyada Dowladda, wuxuuna sanadihii ugu danbeeyey si aad ah uga shaqeynayey degannada kala duwan ee Maamulkaasi ka arrimiyo.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Lafta-Gareen ayaa kulan looga arisanayo waxyaabaha u hirgalay Hay'adda FCA la yeeshay wakiilka cusub ee Hay'adaasi Ikali karvinen, iyadoo kulankana uu qaatay saacado badan.
Wakiilka Hay'adda FCA, ayaa Lafta-Gareen la wadaagay howlaha ay ilaa iyo iminka wax ka qabteen, isagoo xusay in xilligan ay ku howlan yihiin dhisidda golaha degaanka degmooyinka Koonfur Galbeed, isagoo tibaaxay in guulo la taaban karo ay ka keeneen daadalladii ay ka wadeen dhanka Waxbarashada Iyo Caafimaadka.
Madaxweyne Lafta-Gareen ayaa bogaadiyey howsha ay waddo Hay'adda FCA, waxaana uu ugu baaqay in ay kaalin ka gaystaan u gurmashada dadka sida qasabka ah looga soo masaafuriyey Degaannada Maamulka Somaliland ee maalmihii ugu danbeeyey gaarayey goobaha ay ka arrimiso Koonfur Galbeed.
Gudaha Soomaaliya ayaa waxaa ka howl gala Hay'addo gargaar oo kala duwan, kuwaasi oo badankood la shaqeeya Qaramada Midoobay halka qaarka kalana ay yihiin kuwa madax banaan, waxana jirin gurmad rasmi ah oo ay ka gaysteen xaaladda bani'aadminimo ee Soomaaliya ka jirta, iyadoo bulshada Soomaalidana ay ku tilmaamaan dad soo shaqa tagay oo dhaqaale ka raadinaya dadka nugul ee waayaha qalafsan wajahaya.